ကလေးငယ်လေးတွေက သရဲ (ghost) တွေကို တကယ်ပဲ မြင်ရလား? – YANGON STYLE
ကလေးငယ်လေးတွေက သရဲ (ghost) တွေကို တကယ်ပဲ မြင်ရလား?
ကလေးငယ်လေးတွေက သရဲတွေကို မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို ကြားဖူးလား? သူတို့တွေက သရဲတွေကို လူကြီးတွေထက် ပိုမြင်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာ တကယ်လား? ယုံတမ်းစကားပဲလား?
ကျွန်မ ၃ နှစ်အရွယ်တုန်းက အမေက ကျွန်မကို နယ်ကအဖွားအိမ်ကို အလည်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ လူကြီးတွေက မီးဖိုချောင်မှာ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မကတော့ အဖွားအိမ်အကျယ်ကြီးထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့နေခဲ့တယ်။
လူကြီးတွေလစ်တုန်း ကျွန်မ အိမ်အပေါ်ထပ်ကို တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ လှေခါးထိပ်မှာ ကျွန်မနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းအရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ငိုနေတာတွေ့ရတယ်။ “ မေမေ ဟိုမှာ ညီမလေးတစ်ယောက် ငိုနေတယ်။ အောက်ချပေးလိုက်ပါလို့” ကျွန်မ အမေ့ကို လှမ်းပြောခဲ့တယ်။ အမှန်က အဖွားအိမ်မှာ ကျွန်မကလွဲလို့ တစ်ခြားကလေး ရှိမနေခဲ့ပါဘူးတဲ့။ အဖွားအိမ်မှာ နေခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လုံးလုံး ညတိုင်း “ မေမေ ညီမလေးငိုနေပြန်ပြီ” လို့ ကျွန်မပြောခဲ့တယ်လို့ အမေက ပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။
အခု ကျွန်မ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ မမှတ်မိပါဘူး။ အမေပြောပြလို့ သိရတာ။ အခုအဖွားအိမ် ပြန်သွားဖြစ်တယ်။ ကျွန်မသူ့ကို တွေ့ချင်ပေမဲ့ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
စိတ်ရဲ့သဘောက နေ့စဉ် အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်တယ်တဲ့။ ဦးနှောက် က ကျွန်မတို့ လိုချင်တာတွေကို ပုံဖော်ပေးလေ့ရှိပြီး၊ မလိုချင်တာတွေကိုတော့ လျစ်လျှူရှုပြစ်လိုက်တယ်တဲ့။ ဒါဆို အဲ့တုန်းက ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ဆော့နေရတာ ပျင်းလာလို့ အဖော်တစ်ယောက် ဖန်တီးကြည့်မိတာလား???
၃နှစ်အရွယ် ကျွန်မမောင်လေးက “ မမ သားကို ညတုန်းက ဦးဦးတစ်ယောက် ခြေထောက်ကို ကလိ၊ ကလိလုပ်ပြီး လာနှိုးတယ်” လို့ပြောလာတယ်။ ညတုန်းက အိမ်ထဲ လူဝင်တာလား လို့ လန့်သွားမိတယ်။ အမေက “ နင့်မောင်လေး ညတုန်းက ယောင်ပြီးရယ်နေတာ” လို့ လှမ်းပြောတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံး ကလေး အိပ်မက်မက်ခဲ့တာလို့ ယူဆလိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကလေးက “ ခြေထောက်ကို ကလိလုပ်တဲ့ဦးဦး” ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆နှစ်လောက်က accident တစ်ခုကြောင့် ဆုံးသွားတဲ့ ဦးလေးရဲ့ဘွဲ့ဓာတ်ပုံကို လက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတော့မှ ကျွန်မတို့တွေးတာ မှားသွားမှန်း ရိပ်စားမိကြတယ်။
ကလေးတွေက ခြားနားမှုကို သေသေခြာခြာ မပြောပြတတ်ရင်တောင်မှ ဘာကအစစ်အမှန်၊ ဘာက အရိပ်အရောင်လဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အစစ်အမှန်နဲ့ စိတ်ကူးပုံဖော်တာကို ရောထွေးသွားတတ်ကြပြန်ရောတဲ့။ မောင်လေးကရော ဓာတ်ပုံနဲ့လူကို ရောထွေးခဲ့တာလား???
ကျွန်မမှာ တူမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သက်ဦးလေးမို့ အားလုံးတုန်နေအောင် ချစ်ကြတယ်။ အချစ်ဆုံးက သူ့အဘိုးပါ။ သူ့မြေးဦးလေးကို လက်ကမချပဲ ထိန်းရှာတယ်။ မြေးလေး စကားစပြောတဲ့ အရွယ်လေးရောက်တော့ “ ဘိုးဘိုး” လို့ စခေါ်တယ်။ အဘိုးမှာပျော်မဆုံးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ မြေး၊အဘိုးကို သေမင်းက အစောကြီးခွဲပစ်တယ်။ မြေးလေး၂နှစ်ကျော်မှာ ဘိုးဘိုးက သူ့မြေးလေးကို ထားခဲ့တယ်။ အဘိုးရဲ့အိပ်ယာကိုကြည့်ပြီး “ ဘိုးဘိုး၊ ဘိုးဘိုး” လို့မေးရှာတယ်။ ၂နှစ်အရွယ်ကလေးကို သေခြင်းတရားကို ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ? “ ဘိုးဘိုးဆုံးပြီ” လို့ ပြောကြည့်လိုက်တယ်။ သူနားမလည်ဘူး။ “ ဘိုးဘိုး” လို့ ထပ်မေးတယ်။ သူနားလည်အောင် ” ဘိုးဘိုး… ဟိုး… ဟိုး… အဝေး…အဝေး… တာ့တာ…” လို့ လက်ပြနှုတ်ဆက်တဲ့ ပုံစံလုပ်ပြလိုက်တော့ သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဘိုးဘိုး အပြင်သွားတယ်လို့ သူထင်လိုက်တာ။
နာရေးကိစ္စနဲ့ တစ်ပတ်လုံး အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။ ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်ပြီး ညနေပိုင်းမှာ လူကြီးတွေအားလုံး ညှိုးငယ်ပင်ပန်းနေကြပြီ။ ရက်လည်ဆွမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ ဧည့်ခန်းကိုပြန်ရှင်းပြီး အဲ့မှာပဲ အားလုံးခနလှဲနေခဲ့ကြတယ်။ တူမလေးက တစ်ရှူးဘူးတစ်ခုကို ယူဆော့နေခဲ့တယ်။ အားလုံးမျက်လုံးမှိတ်ပြီး ခနနားနေခဲ့တယ်။
တူမလေးဆီက ” တာ့တာ ” ဆိုတဲ့ အသံလေးထွက်လာတယ်။ အားလုံးမျက်လုံးတွေ အလိုလိုပွင့်လာကြတယ်။ “ ဘိုးဘိုး… တာ့တာ” လို့ထပ်ပြောတယ်။ အားလုံးငုတ်တုတ်ထထိုင်မိကြတယ်။ ကလေးလက်ပြနေတဲ့ တံခါးမကြီးဘက်ကို အားလုံးကြည့်လိုက်မိတယ်။ မှောင်ရီပြိုးစပြုနေပေမယ့် လူလုံးကွဲကောင်တော့ မြင်နိုင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ဘာမှမတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ကလေးအမေက သူ့ကလေးကို ပေါင်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်။ ကလေးကတော့ မတုန်လှုပ်အေးအေးလူလူပဲ။
ကလေးငယ်တွေက စကားလုံးအသစ်တွေကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်တဲ့။ တူမလေးက “ ဆုံးပြီ” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ “ ဟိုး… ဟိုး… အဝေး…အဝေး… တာ့တာ…” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို နားလည်ဖို့ သူ့ဘာသာသူ ကြိုးစားခဲ့တာလား? ကျွန်မတို့ မရှင်းပြနိုင်တာကို အဘိုးကသူကိုယ်တိုင် သူ့မြေးလေးကို လာရှင်းပြခဲ့တာလား? ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ?
နှစ်တွေ အတော်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ လှေခါးပေါ်ကညီမလေးကြောင်း အထပ်ထပ် ပြန်နားထောင်ရတာ ကျွန်မ ပျော်နေတုန်းပဲ။ အမေက “ ဘာညီမလေးမှမရှိဘူး။ အဲ့အပေါ် နောက်မသွားနဲ့” လို့ မကြိမ်းမောင်းခဲ့။ ” ညီမလေးက အိပ်ချင်လို့ ဂျီကျနေတာ။ သမီးအရင်အိပ်ရင် ညီမလေးလဲ အိပ်လိမ့်မယ် ” လို့သာပြောပေးခဲ့တယ်။ အမေပြောတာ မှန်တယ်။ ကျွန်မအိပ်ပျော်သွားတော့ ဘာမှ မကြားတော့ဘူး။
တူမလေးလည်း အခု ၄နှစ်ကျော်သွားပြီ။ သူ့ကို ကြောက်စရာ မျက်နှာဖုံးတွေ ဝတ်ပြီး ခြောက်လှန့်ကြည့်မိတယ်။ သူက “ Halloween Party မို့လို့လား။ ဒေါ်‌‌ဒေါ်ရယ်” လို့ ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်မေးတယ်။ သရဲဆိုတာ Halloween Party က ပျော်စရာ တစ်ခုလောက်လို့ပဲ သူတွေးတယ်။ ရင်ခုန်တယ်လေ။
မိဘတွေက သား၊ သမီးတွေမှာ အဲ့လိုတွေ ဖြစ်ရင် စိတ်ပူကြတယ်။ တကယ် စိတ်ပူစရာလား၊ အန္တရာယ်လားဆိုတာ ကလေးကို မေးကြည့်ရင်၊ စောင့်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် ကလေးကို ကြောက်စိတ်ဝင်သွားအောင် မပြောမိဖို့ သတိထားရမှာပါ။
ဒီလို ပုံပြင်မျိုးတွေ ကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးရင်တောင် ကြားဖူးကြမှာပါ။ တကယ်လား။ စိတ်ကူးယဉ်တာလား သက်သေပြဖို့ကတော့ ခက်ခဲနေတုန်းပါ။ ကြုံဖူး၊ ကြားဖူးတာလေးတွေ comment ရေးပြီး ပြောပြခဲ့ကြပါအုံးနော်။
ချင်းပြည်နယ် ကျီးရီးယန်းတောင် ကို အမျိုးသားဥယျာဉ် အဖြစ်သတ်မှတ်တော့မည်
ဆံကေသာအတွက် အားထားရာ Brand တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ Jinda Herbal
ကွန်ပျူတာ ပေါ့ပါးစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ
နှစ်သောင်းကျော်လောက်နဲ့ Camping အရသာကိုခံစားလို့ရစေမယ့် ရန်ကုန်မြို့နဲ့မနီးမဝေးက ဒင်ကြီး Camping Site ⛺️⛺️⛺️